Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad – Cabdi Illay .. Xarunta dhexe natus? Hebel .. Geedkan hoostiisa ayaan ku ogaa ..
Q2aad – Cabdi Illay .. Xarunta dhexe natus? Hebel .. Geedkan hoostiisa ayaan ku ogaa ..
Posted by ONA Admin	/ March 7, 2013
Tababarkii Cabdi illay lasiiyay oo ka koobnaa habka qurbajoogta ay tahay inuu ula hadlo oo ay TPLF-tu xooga saaraysay in ay ku khaldaan wixii ay fursad u helaan maadaama aanay lakulmi karin iyaga, Cabdi ilay sidii loo faray ayuu u fuliyay.
Cabdi illay qorshihii loo diray wuu fuliyay inkastoo uu hadaladii kala khalkhalday, balse dadkii loo baahnaa lama helin, sheekadiina intii ay TPLF aqligeeda ku daraasadaysay way ka fogaatay oo waxaa ka horyimid dad siyaasiyiin noqday kana fiiro dheer, waxaana dhacday in kadib markii lawaayay dadkii larabay ee target ka ahaa inay xooga saareen dadkii kale een xisaabta kujirin maadaama xal kale lawaayay sidoo kalana waxaa laga fursan waayay in Soomaaliwayn dad kamid ah lagu camiro shirarkii.
Balse lacagihii badnaa ee ay isticmaalayeen iyo hadaladii uu Cabdi illay tababarka u soo galay ayaa u suurogaliyay inay dadka qaarkii kasbadeen, dadkaas oo isugu jiray kuwo lacag lagu kasbaday oo iyagu markoodii horaba aana halganka ku jirin amaba la-ogaaday inay ahaayeen dad nolosha ka dhacay oo jaad doon ahaa iyo dad fara kutiris ah oo uu ku kasbaday hadaladii beenta ahaa oo is-yidhi malaha xornimadii ay ONLF sheegaysayba xagan ayay idinka jirtaa.
Sikastoo ay ahaataba waxaa lagu noqday Jigjiga waxaa marlabaad shir lagu galay Addis ababa halkaas oo lagu qiimeeyay wixii ay hiigsanayeen iyo faa’iidadii ay gaadheen, waxaana cadaatay inay gaadhi waayeen guushii ay rabeen. Ugu danbayntiina waxaa la isla qaatay in kuwan lacagaha lagu kasbadayna shaqo looga dhigo probaganda fidinta, kuwii lagu kasbaday hadalada beenta ahna lagu dadaalo in martiqaadyo badan loo sameeyo balse aana la iskusii taxalujin maadaama aysan badnayn, qorshihiina dhicisoobay. Kooxdii TPLF na waxaa laga afgartay uun (Ye Ogaden Hizbi seltinawal) – shacabkii ogaadeen way ilbexeen – oo ay ulajeedeen inay ku adkaan doonto qorshe cusub maleegideedu, maadaama uu target-ku ahaa shacabka qurbajoogta ah kuna fashilmeen, sababtoo ah wali madhicin in hadaladaas gudaha shacabka ku nool loo adeegsado balse waxaa laga yaabaa qoraalkan kadib inay gudaha ka bilaabaan hadaladaas.
Waxay ugu danbayntii isla qaateen in intaas nolosha ka dhacday iyo shakhsiyaadka ay khaldeen lala xidhiidhiyo safaaradaha Itoobiya halkaasna ay aroor kasta ku kalahaan laguna yidhaahdo; “Fadaraalka Itoobiya ayaa adiga dadaalkaaga iyo shaqada aad Itoobiya u hayso og”, ilaa uu ruuxii gaadho heer uu is-yidhaahdo xitaa kuwa kililkaba adigaa kasareeya.
Waxaa dhacday in shakhsiyaad kamid ah kuwii iyagu markay wadankii soo arkeen ka adkaysan waayay waxa meesha ka socdaa inay safaaradaha u sheegeen Cabdi illay waxa uu shacabka ku hayo iyagoo isleh dawladii fadaraalka ayaad la hadlaysaan, balse waxaa lagu sasabay in lala socdo khaladaadka ninkan oo ilgaara lagu eegayo dhawaana xilka laga qaadi doono ee larabo uun in sharciga lawaafajiyo. Marka wadamada qaar waxaa ka dhacday in ay dadkaasi Cabdi illayna meelaha ka aflagaadeeyaan xidhiidhkii safaaradana aysan goynin oo laga aqli badiyay oo ay ku dhacday sheekadii uu qoraagii la odhan jiray OSHO kaga faalooday ninkii sixiroolaha ahaa ee adhiga haystay awoodna u lahaa inuu adhigaas la hadlo, isagoo adhiga mid mid intuu ula hadlo usheegi jiray midkasta, ( adigu waxaad tahay libaax ee kuwan kale ayaa ah adhi, marka adhiga ayaan qashaa ee adigu korka uun kala soco, deedna uu neefkaasi markuu arko ninkii sixiroolaha ahaa oo neef qalanayaba intuu qoslo uu yidhaahdo ileen kaasina adhi ayuu ahaa ), safaaraduna sidii ayay yeeshay oo mid mid ayay ula hadashaa ilaa hada, ninkasta oo safaarada ku xidhana wuxuu aaminsanyahay inuu isagu qiimo gooni ah ugu fadhiyo Itoobiya.
QAABKII LOOLA DHAQMAY DADKII HALGANKA TOOSKA UGU JIRI JIRAY EE ISDHIIBAY
Ugu horayn marka uu ruuxu falaagoobo ee uu Cabdi illay la xidhiidho hadalada uu Cabdi illay adeegsado waa kuwa aan kor ku soo sheegay ee ahaa in uu Cabdi illay laftiisu wakhti uun uu sugayo ee uu go’itaan rabo. Wuxuuna adeegsadaa oo tababarkii uu qaatay kamid ah anigaaba ONLF ah, hadii ay ONLF-nimadu dhab kaatahayna waynu heshiinaynaa dee haday baayac mushtar kaatahayna heshiini mayno.
Marka ruuxii oo inuu isdhiibana rabay xoogaana cabsi ku jirtay marka intaa lagu yidhaahdo wuxuuba is odhan malaha Ilaahay ayaaba arintan kuwaafajiyay horay ayuuna Jigjiga isu gayn.
Jigjiga markuu gaadho guriga Cabdi illay ayaa qado loogu samayn waxaana ladajin guryaha martida oo kuwa cusub ah maadaama ay jiraan kuwo duug ah, waxaana lagayn xafiiska Cabdi illay isagoo loo sheegayo inuu xafiiskii madaxwaynaha joogo, waxaana labari oo saf u soo gali madax ku sheega (kabinet) waxaana dhamaan lagu wada odhan fursad aynu kuwada hadalno unbaynu waynay ee isku si unbaynu wax u wada wadnaa.
Ka dib marka dhowr maalmood oo martiqaad iyo sheeko iyo jaad laga dhargiyo oo waliba hadii uusan qayili jirin lagu odhan maanta waa maalin farxadeed ee qayil ayaa looyeedhi sawir-qaade (camera man), waxaana laduubi isagoo aad u caytamaya oo aan waxba iskula hadhayn. Ujeedada dhawrkaa maamood loo soo dhawaynayayna waxay ahayd in la qabadsiiyo waxa laga doonayo oo la gaadhsiiyo heer uu sifiican ugu caytamo.
Maalinka laga bogto sawirada ayaa ugu danbayn qadada guriga Cabdi ilay, xafiiskiisa iyo la kulankiisaba, waxaana laga rari gurigii martida ee cusbaa waxaana lagayn midkii duuga ahaa ee hore. Mudo yar kadib na guri ayaa loo kirayn oo ladajin, mudo yar kadibna kirada guriga ayaa laga joojin oo isdabar ayaa lagu odhan. Ugudanbayn marka uu in mudo dheer ah ku dhex wareero magaalada Jigjiga ayaa maalinka danbe loo yeedhi ruuxii oo maskaxda ka dhintay oo rajo go’ay waxaana lagu odhan adigu nin fiican ayaad tahay laakiin shaqadu daacad kaama aha ee anagaa kaa roonaanayna ee mushaarkaa yarna qaado sifiicana u shaqee oo ay macneheedu tahay jaajuus noqo.
Intaa kadib ruuxii oo markiisii horeba layaabanaa sida loogalay hadana ay busaaradii iyo darxumadii aad u daashatay maskaxdiisuna aysan caadi ahayn ayaa hadana marka lagu yidhaahdo daacad matihid waxaa ku dhacaya jaha-wareer wuxuuna bilaabi inuu wax walbana ku hadlo wuxuu arkana jaajuuso oo uu xidho, balse waa ruux bini’aadam ah wuxuu habeenkasta qoomamayn isdhiibitaankii uu isdhiibay iyo dambiga uu ka galay saaxiibadiisii halgan.
Mucjisooyinkii layaabka lahaa een arko waxaa kamid ahaa nin masuuliyiinta gudaha ee ONLF katirsanaan jiray oo isdhiibay kadib, markii qaab kaas loola dhaqmayna lagu yidhi xarunta dhexe natus iyo isagii oo leh geedkan ayaan ku ogaa, cabdi illayna uu leeyahay war geedkan ayaan ku ogaa maahee bahasha natus ninyohow qanaayada (riwaayada) naga daayoo.iyo war liyu bolisow bal geedkan geed u eg raadiya ……
Waxaan ku soo gunaanadayaa maqaalkan, heerka xirfad, aqoon iyo siyaasad jabhadnimo ee ay gaadheen ciidanka guduhu ayaa u sahashay in hadii xitaa ninkii maanta xarunta dhexe fadhiyay uu isdhiibo amaba la qabto uusan cadawga ku soo hogaamin karin iyadoo waliba ay TPLF soo martay jabhadnimo mudo dheer ah.
Qaybta 3xaad kala soco, qaabka ay u wajahaan dhalinyarada qurbajoogta ah iyo fanaaniinta….
Qore: C/laahi Xuseen